यूहन्ना – Word of Truth, Nepal
बाइबलका ६६ ओटा मध्ये पाँचओटा पुस्तकहरूको मानवीय लेखक बन्ने (बाह्रचेलामा अधिक सङ्ख्यामा पुस्तकहरू लेख्ने) सौभाग्य यूहन्नालाई दिइयो। यूहन्नाले लेखेका पाचँओटा पुस्तकहरू कुन कुन हुन्? (१) ______________________ (२) ______________________ (३) ______________________ (४) ______________________ (५) ______________________
धेरैले यूहन्नाको गल्तीलाई दोहोर्या एका छन्। तिनीहरू यसरी सोच्दछन्, “यदि ऊ हाम्रो झुण्ड वा मण्डलीको होइन भने उसले ख्रीष्टको सेवा गरिरहेको हुन सक्दैन।” तिनीहरूको कल्पनामा कुनै पनि व्यक्ति ख्रीष्टको सिपाही हुन सक्दैन जबसम्म उसले दुरुस्तै तिनीहरूको जस्तै पोशाक लगाउँदैन। तिनीहरू त्यस्ता प्रत्येक व्यक्तिलाई रोक्न खोज्दैछन् जसले ख्रीष्टलाई तिनीहरूकै तरिकामा सेवा गर्दैनन्। तिनीहरू सोच्दछन्, “यदि मानिसहरू हामीलाई हरेक कुरामा पछ्याइरहेका छैनन् भने उनीहरू कसरी ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका हुन सक्छन् र?”
उदाहरण: मानौं “विश्वास ब्याप्टिस्ट चर्च” नाम गरेको एउटा बाइबलीय मण्डली छ। के उक्त मण्डलीले “ब्याप्टिस्ट” नाम नगरेका अन्य मण्डलीहरूले ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छैनन् भनेर ठान्नु उचित हुन्छ?____________। के “ब्याप्टिस्ट” नामको पोशाक नलगाउने प्रत्येक व्यक्तिलाई दोषी ठहर्‍याउनु उचित हुन्छ?______________। आज मानिसहरू यूहन्नाकै गल्तीलाई कसरी दोहोर्‍याउँदैछन् भन्ने कुराको अन्य उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ?
येशूले याकूब र यूहन्नालाई “____________ का पुत्रहरू” (मर्कूस ३:१७)भन्ने नाम दिनुभएको थियो भन्ने कुराको अध्ययन हामीले अघिल्लो पाठमा गरेका थियौं। यी दुईजनाले प्रभुको विरोध गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई सहन सक्दैनथे (लूका ९:५१-५५) जसबाट यो देखिन्छ कि प्रभुले आफ्ना शत्रुहरूलाई समेत प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यसबेला सम्म बुझ्न सकेका थिएनन् (लूका ९:५६)।
तर यूहन्नाले आफ्नो पाठ सिके, राम्रै गरी सिके। येशूले यूहन्नालाई हप्काउनुभयो र भन्नुभयो, “किनभने मानिसका पुत्र मानिसहरूका प्राणहरूलाई ______________गर्न होइन्, तर ______________ आएका हुन्।” ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभएको थियो भनेर यूहन्नाले अन्तमा राम्ररी बुझ्न सके कि सकेनन् भनी पत्ता लगाउन हामी यूहन्नाको आफ्नै लेखोटहरूमा हेरौं:
यूहन्ना ३:१७ – ख्रीष्ट किन पठाइनुभयो?
यूहन्ना १२:४७ – ख्रीष्ट किन आउनुभयो?
१ यूहन्ना ४:१४ – पिताले पुत्रलाई किन पठाउनुभयो?
ठीक किसिमले प्रेम गर्ने हो भने ठीक किसिमले घृणा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ! कसैले सत्यलाई प्रेम गर्दछ भने उसले झूटलाई घृणा गर्दछ। यूहन्ना प्रेम गर्न राम्ररी जान्दथे साथै उनले घृणा गर्न पनि जान्दथे! उनले झूट र खराबीलाई घृणा गर्थे। उनले असत्यलाई एकछिन पनि ठाउँ दिएनन्। (हेर्नुहोस् १ यूहन्ना ४:१-६)। झूट र खराबीको विरुद्धमा यूहन्नाको आफ्नो जोश अलिकति पनि घटेको थिएन! भजनसङ्ग्रह ९७:१० मा बाइबलले भन्छ – “परमप्रभुलाई ______________ गर्ने सबैले ______________ लाई घृणा गरून्।”
गलाती २:९ मा प्रेरित यूहन्नालाई पावलले प्रशंसा गरेका छन्। पावलले याकूब (येशूका भाइ), केफास (पत्रुस) र यूहन्नालाई “खाँ ___________” भनी उल्लेख गरेका छन्। एउटा भवनमा खाँबाजत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा अरू कुनै हुँदैन। तुलना गर्नुहोस् न्यायकर्ता १६:२९-३०। खाँबाविना भवन ढलेर जान्छ! यसरी यूहन्ना शुरूको मण्डलीका एक अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए।
“फोक्सेज बुक अफ मार्टर्स्” (Foxe’s Book of Martyrs) को अनुसार, सम्राट डोमिशियनको आदेशमा यूहन्ना बाँधिएर रोममा पठाइए जहाँ उनी उम्लिरहेको तेलको कराहीभित्र फ्याँकिए। तर परमेश्वरको आश्चर्यपूर्ण हस्तक्षेपले गर्दा उक्त तेलले उनलाई कुनै हानि गरेन। यो साँच्ची नै भएको थियो या थिएन हामी यकिन गर्न सक्दैनौ, तर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि परमेश्वरले आफ्ना प्रेरितहरूलाई अलौकिक तवरले रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो (मर्कूस १६:१८)। यसले हामीलाई यो पनि सम्झना गराउँछ, परमेश्वरले दिनुभएको उसको काम नसकिएसम्म एउटा विश्वासी मरिहाल्दैन। यूहन्नाको निम्ति परमेश्वरको काम बाँकी नै थियो!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 18:19:282020-04-28 14:39:42यूहन्ना
याकूबफिलिप र बार्थोलोमाइ